Ukuhlala kwisakhiwo sembali esiyinyani
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBirgit
Indlu encinci ibekwe kumgangatho wokuqala kwenye yezona zindlu zinembali ezidweliswe kwisakhelo e-Eckenhagen. Zonke zincinci kakhulu kwaye zithambile, iisilingi eziphantsi ezineebhanti zesilingi zangaphambili kunye neefestile ezincinci ezinephaneli yomthi yangaphakathi. Isakhiwo sethu sembali sasiyinxalenye ye-1770 yezakhiwo ezijikeleze icawa yeziko lakudala lase-Eckenhagen.
Le ndlu yi-42qm kwaye inendawo yokungena enesofa, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela elinefestile encinci kunye neshawari, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye netafile yokutyela kunye negumbi elincinci lokuhlala / leTV elinesofa. Ufikelelo lungena kumnyango ophambili ongaphezulu kwezitepsi ukuya kumgangatho wokuqala, kodwa uzimele geqe kwindawo yabucala yabanini, abahlala kumgangatho osezantsi. Uya kufumana ubume bexesha elinye kunye nentuthuzelo yanamhlanje, njengokufudumeza okuphakathi, ikhitshi elinezixhobo, umatshini wokuhlamba izitya, iSat TV kunye ne-Intanethi. Ukusuka kwifulethi unombono omangalisayo kwigadi yethu kunye neziko lakudala lelali.
Indawo yase-Eckenhagen ilungele uhambo, umzekelo ngenye imini ukuya eCologne ngenxa yendlela ekufutshane ye-A4. Ikhosi yethu yeGalufa kwi-7km okanye indawo yokutyibiliza kunye ne-skiing yaseBlockhaus njengamadama amaninzi amanzi akufutshane kakhulu kuthi.
Indlu yethu ijikelezwe yigadi ebiyelweyo enechibi elincinane lenyibiba. Kwifenitshala yegadi yakho, iparasol, iHollywood swing kunye nesitulo solwandle. I-Grill enokwenzeka kunye ne-sundowner kukho indawo ekutshoneni kwelanga kwiyadi yethu yangaphambili.
Kwindawo onayo yokupaka kwindawo yethu
4.97 · Izimvo eziyi-29
Konke okuyimfuneko kukuhamba umgama, njengevenkile yokubhaka, iCafé, iindawo zokutyela, ibhula, iofisi yeposi, ikhemesti, ibhanki, iofisi yolwazi lwabakhenkethi, i-newssagent, ivenkile yesaphulelo, idama lokuqubha kunye nesauna, i-minigolf, inkawu yethu edumileyo kunye nepaki yeentaka, iziko lokubuyisela abantu kwipaki. , njengommandla wethu omangalisayo kunye namahlathi kunye neendlela kule ndalo intle. Uya kufikelela kwibala lethu legalufa kumgama oziikhilomitha ezisi-7.
Umbuki zindwendwe ngu- Birgit
njengoko sihlala apha onawo kuyo yonke imibuzo kunye nolwazi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Reichshof